Arsenal oo ogolaatay iney la soo wareegto xidiga Nicolas Pepe (Akhriso Heshiiska) – Bandhiga
Arsenal oo ogolaatay iney la soo wareegto xidiga Nicolas Pepe (Akhriso Heshiiska)
Kooxda Arsenal aya sameynaysa saxiixyo xagaagan waxana lala xiriirinaya qaar ka mid ah xidigaha sida weyn loo doonayo kuwaa oo la yaab ku abuuraya taagrayasha koxda.
Waxa lagu soo waramayaa inay ogolaatay inay laso wareegto xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Lille ee Nicolas Pepe.
Gunners ayaa kaga hormartay kooxda Napoli saxiixa Nicolas Pepe waxayna wadahadalo horumar leh isla meel dhigeyn kooxda Lillle si ay kagala wareegan xidiga garabka ka ciyaara icolas Pepe.
Kooxda Napoli ayaa diyaar u aheyd inay bixiso mushaharka Pepe sanadkii 3.6 milyan ginni, laakiin Arsenal ayaa la fahamsan yahay inay bixineyso heshiisyo ka fiican. Xiddiga reer Ivory Coast ayaa doonaya £ 4.5m sanadkii.
Sida ay qoreyso BBC Sport, Gunners ayaa bixin doonta qeyb heshiiska ka mid ah waxaana la filayaa in heshiis shan sano ah la gaaran 48da saacadood ee soo socota,iyago bixin doona lacag gaareysa €80m (£72m).
Pepe, oo ay sidoo kale doonayeen kooxaha Manchester United iyo Liverpool, ayaa bedel u noqon kara saaxiibkiisa xulka Ivory Coast Wilfried Zaha iyadoo Unai Emery uu u muuqdo inuu xoojin doono gooldhalinta.
Heshiiska ay la galeen Gunners ayaa yimid ka dib markii wakiilka Pepe, Samir Khiat, uu u soo dhigay baraha bulshada hadal uu ku beeniyay inuu macmiilkiisu qarka u saaran yahay inuu ku biiro Manchester United, isagoo bartiisa twitterka ku soo qoray “warar been abuur ah”.
Hooyo Soomaali ah iyo 5 caruurteeda ah oo lagu amray iney ka baxaan dalka Norway